Barashada sida wax loo barto: Sida loogu guuleysto kulliyadda 2022
December 1, 2021 Okpara Francis
Barashada sida wax loo barto: Sida loogu guuleysto kulliyadda
Kuleejku waa goob waxbarasho. Arday badan ayaa hammiya inay aadaan kulliyad oo ay ku faraxsan yihiin markay xubin ka noqdaan jaamacadda. Ka dib maalinta koowaad ee kulliyadda, arday badan ayaa fahma in barashada halkaas ay ka duwan tahay wixii ay ku sameeyeen dugsiga sare.
Waxaa laga yaabaa inaad horay u taqaanay weedha "bar in aad wax barato". Way fiicantahay haddaadan fahmin macnaheeda. Hadda, kuleejka waxaad u maleyn kartaa inaad u baahan tahay inaad sameyso wax cajiib ah.
Talada lagu baranayo sida wax loo barto waa talada ugu sareysa ee laga yaabo inaad haysato. Waxaad u baahan tahay inaad barato sida wax looga barto kulliyadda, 9-kan qodob waxaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan inaad noqoto arday wax ku ool ah. Waxaa jira xeelado badan oo waxbarasho oo horumarsan, waxaanan soo aruurinay kuwa kaa caawin kara inaad noqoto arday sare.
Markaad barato xeeladaha aasaasiga ah ee waxbarashada, waxaad isku daydaa inaad kasbato xirfadaha sida loo habeeyo loona habeeyo macluumaadka si degdeg ah.
Caadada barashada waxtarka leh waxay kaa caawinaysaa inaad xafido xogta cusub oo aad u isticmaasho xaalado kala duwan. Barashada sida wax looga barto kulliyadda maaha in maskaxda lagu hayo xaqiiqada oo keliya. Waxaa laga yaabaa inaad taqaan sida qalbiga looga barto.
Istaraatiijiyadani waxay kaa caawin kartaa inaad si qotodheer u qiimeyso macluumaadka, u falanqayso, oo aad u habayso shaqadaada qaab kaa caawinaysa inaad si fudud ugu shaqeyso aqoon cusub. Markaad akhrido maqaalkan waxaad ogaan kartaa sida loo habeeyo shaqadaada kulliyadda si aad maalmahan uga dhigto kuwa ugu waxtarka badan noloshaada. Kaliya akhri qaybta macluumaadka hoose oo ku raaxayso talooyinkan waxbarasho.
Had iyo jeer waxaa jira macluumaad badan oo lagu barto kulliyadda ama machad kasta oo kale oo waxbarasho. Haddii aad hawl kasta u aragto mid aad muhiim u ah, waxaa laga yaabaa inaad ku gubato dhowr bilood gudahood. Cadaadiska iyo niyad-jabka oo ka yimaada inaad awoodin inaad dhamaystirto hawl kasta ayaa ku taageeri doonta.
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato nolosha kulliyadda iyo habka wax-barashada, waa inaad mudnaanta siisaa shaqooyinka. Waa inaad maaddooyinka oo dhan u barato sida ugu waxtarka badan. Waxaad u baahan tahay inaad fahamto hawlaha mudnaanta ugu sarreeya leh iyo kuwa u baahan waqti iyo dadaal yar.
Ku bixi wakhti badan oo ku saabsan hawlaha mudnaanta leh, oo si degdeg ah u dhammaystir hawlaha aan ahayn mudnaantaada. Sidoo kale, waxaad u igman kartaa hawlaha qaar qorayaasha curiska.
Dooro wakhtiga ugu fiican ee wax-barashada
Waa inaad hore u maqashay in dadku subaxdii ka waxsoosaar badan yihiin fiidkii. Waxay kugu noqon kartaa masiibo dhab ah inaad kacdo 4 subaxnimo. Dhegayso noolahaaga iyo saacadda noolahaaga. Haddii aad dareento fiicnaan markaad wax baraneyso ka dib qorrax dhaca ama habeenka dambe, waa doorashadaada.
Saacadaha wareegga bini'aadamka ayaa u shaqeeya faa'iidada shakhsi ahaaneed. Hagaag, maadaama dadka oo dhan ay ka duwan yihiin, way fiican tahay haddii aad haysato saacado wax soo saar badan marka loo eego kuwa kale. Had iyo jeer waa in aad tixgelisaa in barashada halkii aad seexan lahayd aysan ahayn fikrad wanaagsan. Dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in dadku ay seexdaan 7-8 saacadood oo hurdo ah si ay tamar u yeeshaan.
Isticmaal gacan-qoris si aad wax u qorto
Ku noolaanshaha waagii kombuyuutarku waxa ay naga dhigtay mid ka waxtar badan marka wax la qorayo. Waxaa intaa dheer, codsiyo kala duwan oo u oggolaanaya samaynta qoraalka ama duubista codkaaga ayaa xitaa fududeynaya shaqada iyo waxbarashada.
Markaa, waxa laga yaabaa inaad shido makarafoon oo aad duubto fikradaha aad ku hayso socodka hawsha cilmi baadhistaada. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in gacan-ku-qoris ay kor u qaaddo fahamka iyo ku-haynta labadaba. Waxa jira xidhiidh ka dhexeeya gacmaha dadka iyo maskaxda.
Carruurtu waxay horumariyaan xirfadaha dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa iyagoo ku ciyaaraya faraha. Ha illoobin qorista farta oo ka mid ah siyaabaha aad ku noqon karto mid caqli badan oo aad u casrisan. Kaliya isticmaal qalin dhowr jeer maalintii.
Baro xirfadaha qoraal-qaadista
Waxaa laga yaabaa inaad yaabto, laakiin waxaad u baahan tahay inaad barato sida loo sameeyo qoraallada. Tani kaliya maaha in wax lagu qoro warqad. Qoraalku waa habraac u baahan in aad si dhab ah u qiimeyso waxa la qorayo.
Markaad qoraal qaadato, waxaad soo koobaysaa macluumaadka oo aad soo saartaa xaqiiqooyinka ugu faa'iidada badan iyo kuwa muhiimka ah. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida wax loo qoro:
Soo koob fikradaha oo isticmaal erayadaada
Ka tag meelo bannaan si aad mustaqbalka wax ugu darto
Soo gaabiyo oo isticmaal calaamadaha, kaliya hubi inaad fahantay qoraalkaaga
Isticmaal jumlado, ha isticmaalin jumlado
U fiirso xaqiiqooyinka ugu muhiimsan
U sharax kuwa kale
Habka ugu waxtarka badan ee lagu baran karo macluumaadka waa in loo sharaxo qof kale. Markaad si cad u qeexdo macluumaadka, waxaad si fiican u habaynaysaa. Waxaad isticmaali kartaa erayo kala duwan si aad u soo bandhigto fikrado isku mid ah, waxayna kaa caawinaysaa inaad xaqiiqooyinka xifdiso.
Sidoo kale, waxaad ku celin kartaa hal mar oo kale wixii aad horay u baratay oo aad si naqdi leh ugala hadasho macluumaadkan kor u qaadaya xifdinta xaqiiqooyinka. Haddii aadan haysan qof aad wax barato, iska dhig inaad macallin tahay oo aad u baahan tahay inaad sharraxdo wax cusub.
Ku dhawaaq erayada
Dhegeysigu waa hal dariiqo oo kale oo lagu barto maaddada. Markaad ku hadasho oo aad dhagaysato macluumaadka, waxaad isticmaashaa laba kanaal oo kala duwan oo xogta lagu farsameeyo.
Dadku si degdeg ah ayey wax u akhriyaan iyagoon erayo ku dhawaaqin. Haddii aad rabto inaad xogta u xafido si ka waxtar badan, waxaad u baahan tahay inaad hadasho. Isku day inaad akhrido dhowr bog oo ka mid ah qoraalka ka dibna ku celi fikradaha waaweyn. Waxa kale oo aad ku hadli kartaa muraayad horteeda.
Istaraatiijiyadan soo socota waxay kaa caawin kartaa inaad iska dhigto inaad la hadasho dad kale. Waxay kaa caawin kartaa in la isku daro xeeladda hadalka iyo fikradda lagu baro qof. Ku-dhaqanka hadalka ayaa ardaydu aad u qiimeeyaan. Ha illoobin.
Maab Maskaxda Samee
Marka ay tahay inaad maskaxda ku hayso waxyaabo badan, waxaad isku dayi kartaa inaad u habayso qaab khariidad maskaxeed. Tani waa istaraatiijiyad wax ku ool ah oo aad dhigto fikradda ugu weyn bartamaha bogga ka dibna aad isticmaasho khadadka si aad ugu xirto fikrado yaryar.
Sidan oo kale, waxaad abaabushaa alaabta adoo isticmaalaya isku xirka fikradaha. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad xafiddo macluumaadka oo aad si dhakhso leh u hesho xidhiidhka. Isticmaal erayo, weedho, odhaahyo, iyo xataa sawirro haddii ay waxtar leedahay.
U isticmaal tijaabinta mid ka mid ah xeeladaha si aad si hufan wax ugu barato. Marka aad baratay maaddo gaar ah, ka raadi imtixaan gaaban online oo isticmaal si aad u fahamto inaad baratay maaddada.
Tijaabooyinku waxay caawiyaan inay arkaan waxaad hore u fahantay iyo macluumaadka weli u baahan dareenkaaga. Ha illoobin nooc kasta oo shaybaadho ah oo aad diyaar u tahay. U isticmaal fursad aad ku qiimayso aqoontaada oo aad aragto daldaloolo.
Weligaa ha dooran inaad wax barato intii aad seexan lahayd. Hurdada wanaagsan waa dammaanad in maskaxdaadu ay xoogaa nasasho ah leedahay oo ay dib u cusbooneysiin karto dhaqdhaqaaqeeda. Haddii aad si joogto ah u seexato 3-4 saacadood maalintii, waxaad dareemi kartaa daal degdeg ah.
Ha u ogolaanin barashada inay waxyeelo u geysato caafimaadkaaga. Dadka aan hurdo ku filan u seexan waxay noqdaan kuwo niyad-jabsan oo ku guul-darraysta inay xafidaan macluumaadka.
Previous Post:Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato sharciyada socdaalka UK
Post Next:11 jaamacadood oo jaban oo ku yaal Faransiiska oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah